स्वास्थ्यलाई धेरै सुत्दा पुग्ने हानिहरु यस्ता छन् – Saurahaonline.com
स्वास्थ्यलाई धेरै सुत्दा पुग्ने हानिहरु यस्ता छन्
शरीरको थकाइ मार्नको लागी सुत्नु निकै जरुरी छ । मानिसले दैनिक ६-८ घण्टा सुत्नु जरुरी छ । यो भन्दा कम वा यो भन्दा धेरै सुत्नु स्वास्थ्यको लागी हानिकारक मानिन्छ । प्राय जसो हामि बिहान धेरै समयसम्म सुतेर ढिलो उठ्ने गर्छौं । बिहानको निन्द्रा निकै मिठो हुने भएकाले बिहान उठ्न हामीलाई गाह्रो लाग्छ । बढी सुत्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु आउने अध्ययनले देखाएको छ ।
धेरै सुत्दा स्वास्थ्यलाई पुग्ने हानीहरु यस्ता छन् :
१. आवश्यकता भन्दा लामो सुताइका कारण मानिसहरुमा डिप्रेसनका लक्षणहरु देखिने जोखिम बढ्छ ।
२. अध्ययन अनुसार ७–८ घण्टामात्र सुत्ने महिलाहरुमा गर्भाधारणको दर उच्च हुन्छ भने ९ देखि ११ घण्टासम्म सुत्ने महिलाहरुमा गर्भाधारणको दर न्युन हुन्छ ।
यस्तै बढि सुत्नाले जिउमा मधुमेहको जोखिम पनि बढ्ने हुन्छछ । अध्ययन अनुसार रातमा ८ घण्टा भन्दा बढि सुत्ने मानिसमा टाइप टू मधुमेहको जोखिम ७ देखि ८ घण्टासम्म मात्र सुत्ने मानिसमा भन्दा दोब्बर रहने हुन्छ ।
३ आवश्यकता भन्दा कम तथा आवश्यकता भन्दा बढि सुताइले जिउको वजन बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
४. सन् २०१२ मा अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजीको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार रातमा ८ घण्टाभन्दा बढि सुत्नाले मुटु सम्बन्धि स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैले बढि सुत्ने मानिस मुटु तथा रगत सम्बन्धि विभिन्न खाले रोग र हृदयाघातबाट समेत अल्पायुमै मर्ने जोखिम १।३ गुणा बढि हुने अध्ययनले देखाएको छ ।